खबर Archives - Page2of 108 - www.kchhakhabar.com
कालो दिन भन्दै पूर्वका नौ जिल्ला बन्द, जनजीबन कष्टकर
पाँचथर । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निकट लिम्बुवान राज्य परिषदले मंगलबार प्रदेश १ मा एक दिन वन्दको आहवान गरेको छ । वन्द आह्वान गरेको कारण जनजीबन विहानैदेखि प्रभाबित बनेको छ । पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेर लिम्बुवान राज्य खोसेको बिरोधमा परिषदले हरेक वर्ष साउन २२ गतेलाई ‘कालो दिन’ भन्दै बन्द आह्वान गर्दछ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, ईलाम, सुनसरी, मोरङ र झापामा याता...
पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएका छन । दैनिक रुपमा बलात्कारका घटनाहरु सार्बजनिक हुने क्रम बढदो छ । बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रम समेत बढदो छ । धेरैजसो बालिकाहरु बलात्कारको शिकार भईरहेको समेत पछिल्लो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । कतिपय अबस्थामा भने राजीखुसीमा यौनसम्पर्क भएपनि पछि बलात्कारको आरोप लगाउने र बार्गेनिङ गर्ने क्रम समेत उत्तिकै बढेको छ । केही मानिसहरु नियतबश नै शूरुमा राजीखुसीम...
इटहरीको शडक, शडक हो कि ताल
इटहरी/ पूर्वको उदाउँदो शहर इटहरी सोमबार सानो पानी पर्दा पनी जलमग्न भएको छ । सोमबार दिउसो परेको सानो पानीले हिडी नसक्नु बनेको थियो । यहाँका हाइवे सडकहरुमा सहजै हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था बनेन । व्यापारिक दृष्टिकोणले पूर्वकै नेतृत्व गर्दै आएको शहर वर्षेनी डुबिरहँदा किन मौन बस्दै आएको छ सरकार ? किन वोल्दैनन् इटहरीका राजनीतिक दल ? वर्षेनी सर्वसाधारणको ओछ्यानवाट बाढी कुदिरहँदा रोकथामको सामान्य विषयबा...
नयाँ शक्ति पार्टीका पूर्वसंयोजक खोलामा मृत अवस्थामा फेला
जुम्ला। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका पुर्व संयोजक राधाकृष्ण बुड्थापा आइतबार दिउँसो जुम्लास्थित सनराइज होटलबाट निस्किएपछि जुगाड खोलामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । अहिले बुड्थापको शवलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ । नयाँ शक्ति पार्टी जुम्लाका संयोजक नरेन्द्रनाथ योगीले बुड्थापाको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको दावी गरेका छन् । योगीले घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानव...
ललितपुर स्थित महालक्ष्मी नगरपालिका–८ लुभूमा गोदावरी खोलाले मानिस सहित एक कार बगाएको छ । सोमबार बिहान ५ बजेतिर बा १४ च ४७२९ नम्बरको कार नदी पार गर्ने क्रममा बगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार स्थानीयले कार चालकको उद्दार गरेका छन । कार चालक सुरक्षित रहेको ललितपुर प्रहरीले बताएको छ । महानगरपालिकाले नयाँ पुल बनाउने भन्दै ह्युमपाइप राखेर आवागमनको व्यवस्था ग...
भक्तपुरको डोलेश्वरमा प्रहरी र अपहरणकारी वीच भएको मुठभेडमा दुई जना अपहरणकारीको मृत्यु भएको छ । आइतबार साँझदेखि अपहरणमा परेका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको खोजी गर्ने क्रममा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले डोलेश्वरमा अपहरणकारीमाथि गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा अपहरणकारीद्वय अजय तामाङ र गोपाल तामाङ छन् । घटनास्थलबाट एउटा पेस्तोल त्यसमा लाग्ने गोली र अपहरणकार्यमा प्रयोग भएको मोब...
चितवन / जिल्ला अदालत चितवनले गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवाला नुरप्रसाद अधिकारीलाई झिकाउन पुनः आदेश गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलाशले आज उक्त आदेश गरेको हो । शर्माले वादी, प्रतिवादी र जाहेरवालाका अधिवक्ताको बहस सुनेपछि अदालती बन्दोबस्तीको ११० को रित पु¥याई अधिकारीलाई पुनः म्याद जारी गर्न आदेश गर्नुभएको अदालतका स्रेस्तेदार गेहेन्द्रराज पन्तले बत...
ठूला तथा नाम चलेका १३ उद्योगकै उत्पादन गुणस्तरहीन
विराटनगर । ठूला तथा नाम चलेका उद्योगबाट उत्पादित खाद्यान्न न्युन गुणस्तरको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले पुर्वका उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको नमूना संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो । जसमा १३ वटा उद्योगबाट उत्पादित चामल, दाल, तेल, चाउचाउ न्युन गुणस्तरको फेला परेको हो ।क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बिराटनगरले खाद्य बस्तु...
नेपालकाे राष्ट्रिय झण्डा अंकित भवन यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
इटहरी । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत सुनसरीकाे इटहरी स्थित पूर्वलाइनमा बनेकाे नेपालकाे राष्ट्रिय झण्डा अंकित भवन यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकाे छ । फेशबुक ट्विटर , भाइबरमा सेल्फि खिचेर घर संगैकाे तस्विर राख्न अहिले भ्याइनभ्याइ छ । प्रदेश एककाे नामि सहर भनेर चिनिने इटहरीमा पछिल्लाे समय ब्यापारीक प्रतिस्पर्धासंगै अग्ला भवनहरू बनाउने हाेडबाजी चलिरहेकाे बेला याे भवनले अहिले निकै चर्चा पाएकाे ...